Qaramada Midoobay Oo Dowlada Soomaaliya Ugu Baaqay Inay Soo Dedejiso Dhameystirka Iyo Hirgilinta Roadmap Xuquuqda Aadanaha Ee Soomaaliya. – idalenews.com
Muqdisho: Khabiirka Madaxbannaan ee Qraamada Midoobay ee ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya , Shamsul Bari , ayaa ugu baaqay Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay dhammeystirta, islamnarkaana hirgeliso roadmap xuquuqda aadanaha.
“Geedi socodkaxuquuqda aadanaha wuxuu qeexayaa awooda dawladda ay u leedahay inay soo dedejiso hirgilinta Roadmapka. ” ayuu yidhi Bari .
“Dhammeystirka wuxuu muujiyaan ballanqaad daacad ah ee xukuumadda ay u sameyso dib u dhiska iyo aasaaska iyo dhismayaasha ee xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya , ” ayuu hadalkiisa ku daray .
Bari ayaa si gaar ah baaq ugu jeediyay raysal wasaaraha cusub ee dhawaan uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliya,isagoona ka codsaday inuu soo de dejiyo hirgilinta Xuquuqda aadahana ee Soomaaliya,taasi oo uu sheegay inay suurta galin doonto in wax badan ay ka badasho xaalada xaquuqda aadanaha ee hada Soomaaliya looga dhaqmo.
“Waxaan ugu baaqaya madaxa cusub ee dowladda iyo beesha caalamka in ay ka faa’idaystaan ​​fursadda ah in la dhiso Soomaaliya cusub , iyo waxyaabo kale , talinta sharciga iyo ixtiraamka xuquuqda aadanaha Soomaalida oo dhan u noqon lahaa Mid Wanaagsan. , ” sida uu Khabiirka uu sheegay.
“Roadmap Xuquuqda Aadanaha waxay bixisaa fursad u gaar ah oo la horumariyo xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya . Si kastaba ha ahaatee , haddii aysan jirin waa ku lug ballaaran oo firfircoon by dhan ka welwelsan , waxa uu noqon doonaa adag tahay in la hirgeliyo , ” ayuu yidhi Khabiirka Madaxbannaan ee .
“Waxaan kuugula talinaynaa Dowladda Federaalka in ay kula talin lahaa maamul goboleedyada iyo ururada bulshada rayidka ah Soomaaliya oo dhan on dhammeystirka Roadmap- tasho , ” ayuu ku celiyay.
Idale News Online Muqdishu.